हाम्रो प्रतिविम्ब – हाम्रो प्रतिविम्ब
सुन्दर धरान बजार नियाल्दा
नियाल्दै छु नजिकबाट परिबर्तित धरान बजारलाई लाग्छ म भन्दा छिट्टो दौडी रहेछ ऊ, म तरुनी हुँदा ऊ बच्चै थियो ।अहिले ! म बुढी हुँदा ऊ मस्त तरुनी भएको छ । हरेक साँझ उसलाई चुमेर निदाउने साँगुरी भन्ज्याङ , पन्चकन्या डाँडा र भेडेटार डाँडा, लाग्छ उसैको पर्खाईमा अनेक रंग बदल्दै मस्त मस्त बसेका छन् । सर्दै-सर्दै विजयपुर डाँडा बाँजोघराको भित्तासम्म उसलाई चुम्न आईपुगेको छ । २०४६/४७ सालतिर हामी सदन स्कुल पढ्दा ताका त्यो भित्ता एक्लै उक्लिन डर लाग्ने जंगल थियो ।
वरिपरि विदेशी डिजाईनमा बनेका रंगीचंगी घरै घरको सामु हामी पढेको सरकारी स्कुल उही पुरानो साईन बोर्ड श्री सिक्षा सदन माध्यामिक विध्यालको परिचय बोकेर नयाँ नयाँ बिल्डिंग सामु आफ्नो पुरानो छानो जस्ताको पाताले लाज छोपेर बसेको छ । कक्षा सुरु हुनु अघि हामी लाईन उभिएर त्यो बेलाको राष्ट्रीय गित श्रीमान गम्बिर नेपाली, गाएको प्रांगण र कक्षा ९ को अगाडिको ओरालो झर्ने बरन्डा अझै उस्तै रहेछ । हेर्दा लाग्छ, हामी बिध्यार्थिहरुलाई काखमा राखेर हात समाउदै क,ख,रा सिकाउदै परिबर्तनको उज्यालो बाटोतिर धकेल्दा धकेल्दै आफु आफैलाई परिबर्तन गर्न बिर्सिए जस्तो, उही रंग उप्किएको भित्ता र भत्किन लागेको झ्याल ढोका लिएर निरस र निराश बसेको देखिन्छ ।
मान्छेपिछे भिन्न भिन्न चाह छ
सबैको इच्छा हुन्न पूरा थाह छ।
लक्ष्य साधी हिडे पनि हामीले
पदपद अल्मल्याउने राह छ।
कविता – “घाम र रुखको कथा”
म गोधूली बाटै
सक्दो चिहाउदै थिएँ
गरेर मेरो आङ
डुबी गयौ घाम !
इडिपसग्रन्थिबाहिर- बहुरङ्गिक सपना
अलिकति माथि देउरालीसम्मन् पुगेर समसाँझ मोर्फियसको पूजाअर्चना गर्दै
मानिसहरु गड्यौला भएर छन्, हिडिरहेछन्………..
गड्यौंलाहरु मानिस भएर छन्, हिडिरहेछन्……….
हतार-हतार सायासले ल्याङ् फ्याङ जिन्दगीसित
कहाँ पुग्ने होलान् यी मानिसहरु !
”सपना त रातभरिलाई हो हजुर” लाई
छ्याङ्गै उज्यालो पारेर लाठे आत्मप्रबोधनले
प्रतिचिन्तनमा छु-कहीं होइनमा हिंडेर छु ‘ले
म टुक्रिन्दै टुक्रा टुक्रा क्रा
खण्डिकरणको नियमले गिदीको लिदी निकालेर
कृया र प्रतिकृयाको विनियमले हृदय फुटालेर जम्मै
अनि ‘नी न्युक्लियस्,प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुँदै
त- रङ्ग फुक्लिएर उही खण्डिकरणले, कृया-प्रतिकृयाले
हार्दिक जतनले रङ्ग मस्तिष्कको चेपमा सिउरेर
थेसिस्,एन्टि-थेसिस र सिन्थेसिसको
इदम्, अहम् र पराहम्को साँघुरो घरभित्र
अन्तरिम निन्द्रा एक झप्को निदाउँछु म
इडिपसग्रन्थिबाहिर बहुरङ्गिक सपना बोकेर
उँभो सगरमाथातिर उक्लन्दै गरेको मानिस !
इदम्- बाट बनेको सपना सम्यक् ज्ञानले बन्छ बहुरङ्गिक सपना !
इदम् -बाट बनेको सपना सम्यक् विज्ञानले बन्छ बहुरङ्गिक सपना !
इदम्- बाट बनेको सपना सम्यक् संज्ञानले बन्छ बहुरङ्गिक सपना !
सपनाको पश्चात विस्तारण-
म आमा र बहिनीसित सिँढी उक्लन्दै हुन्छु । उक्लन्दा उक्लन्दै छतमाथि पुगेपछि मलाई थाहा हुन्छ कि मेरी बहिनी शिशुकी आमा चाँडै हुँदै छे ।
फ्रायड भन्छन्- सिँढी उक्लनु सम्भोग गर्नु हो ।
एडलर भन्छन्- सिँढी उक्लनु क ठिनाइमा विजय गर्दै जानु हो ।
युङ्ग भन्छन्- सिँढी उक्लनु भविष्यको उन्नति देख्नु हो ।
म भन्छु-सिँढी उक्लनु सादा जीवनमा रङ्ग पोतिनु हो ।
इदम् -बाट बनेको सपना अन्तरङ्गले बन्छ बहुरङ्गिक सपना !
इदम् – बाट बनेको सपना प्रतिरङ्गले बन्छ बहुरङ्गिक सपना !
इदम् -बाट बनेको सपना रङ्गले बन्छ बहुरङ्गिक सपना !